पत्ता लगाउनुहोस् किन तपाईले अप्ठ्यारो पार्यो बेहुली र दुर्गम तरिकाले यसलाई छुटकारा पाउनु - स्वास्थ्य बन्धन
घर » ब्लग » पत्ता लगाउनुहोस् किन तपाईले जिद्दी पातलो र दुर्गम उपाय पाउनु भएको छ
पत्ता लगाउनुहोस् किन तपाईले जिद्दी पातलो र दुर्गम उपाय पाउनु भएको छ
जिद्दी पेट फैट को मुख्य कारणहरू के हो? यसमा धेरै सिद्धान्तहरू छन्। केही मानिसहरू भन्छन् कि यो गरीब आनुवंशिक छ। अन्य मानिसहरूले यो तनावको दाबी गर्छन्। र धेरै अन्य मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि यो एक ढिलो चयापचयको कारण हो। त्यसैले सत्य के हो? वास्तवमा, यो लगभग सँधै अनावश्यक भोजन खाने बानी र निष्क्रिय जीवनशैलीको परिणाम हो।
* वजन घटाने को लागि सबै भन्दा प्रभावी आहार योजना के हो?
एक आहार जसले धेरै प्राकृतिक सम्पूर्ण खानाहरू समावेश गर्दछ। सम्झनका लागि आधारभूत नियम प्रशोधन गरिएका कुनै पनि खानेकुराहरू जोगाउन हो। यो एक शक्तिशाली तर सरल रणनीति हो जसले धेरैले आफ्नो पेट वसा छोड्न प्रयोग गरेको छ। जब तपाईंले खाएको समय पनि महत्त्वपूर्ण छ। सम्पूर्णको रूपमा, केवल लामो अवधिको निष्क्रियताको समयमा खाने भन्दा टाढाको लक्ष्य। अधिक व्यक्तका लागि, यो सुत्न अघि सही मा साँझ ढिलो हुनेछ।
किनकि तपाईं क्यालोरीहरू जलाउन पर्याप्त सक्रिय छैनन्, यो सामान्यतया कारणहरूमध्ये यो भनेको हो कि प्रायजसो यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईंले सोच्नुअघि खाना खाएनन्। त्यसोभए शरीरले केवल पोषक तत्व को सबै भन्दा बढी पोषक तत्व को भण्डारण गर्दछ। यदि तपाईंले निष्क्रियताको समयमा भोक लगाउनुभयो भने केहि फाईल र भिडीयो खाऊ। यदि तपाइँ प्लानको पालना गर्न सजिलो हुनुहुन्छ भने, जाँच गर्नुहोस् खाट बन्द खाओ कार्यक्रम जो पुरुषहरु र सबै युगहरु को महिलाहरुको लागी राम्रो छ। स्थिर वजन घटानेको लागि अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम जुन हामीले सिफारिस गर्दछौं4हप्ता आहार ब्रायन फ्लैट द्वारा।
चाहे तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको योजना मध्ये एक छान्नुहोस् वा होइन, वजन घटानेको तलल्लो रेखा यो हो कि तपाईंको भोजन योजना तपाईको workouts को रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं केवल कचरा जस्तै खाँदै हुनुहुन्छ भने सबै समय व्यायामशालामा किन बर्बाद गर्नुहुन्छ? तपाईंको खाना खाने बानीहरू परिवर्तन गर्न र अधिक सक्रिय गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो हामी सल्लाह दिन सक्छौं कि सल्लाहको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुक्रा हो।
* सबै भन्दा कुशल कसरत दिनचर्या के हो?
तपाईंले सुनेका बावजुद, यो ट्रेडमिलमा घण्टापछि दौडिरहेको छैन। दौडको मोटो जलविद्युत प्रभाव अत्यन्त अतिव्यापी छ, र तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण परिणामहरू हेर्न अविश्वसनीय रूपमा लामो अवधिको लागि दौडिनुपर्छ।
पुरुषहरूको लागि, हामीले प्रशंसा गर्ने उत्कृष्ट व्यायाम कार्यक्रम हो शरीर वजन जनावर कार्यक्रम। शरीर वजन जनावर एक शानदार 30 दिन योजना हो जुन तपाइँको आफ्नै शरीरको वजन प्रयोग गरेर समावेश गर्दछ। उत्तम शरीरको वजन अभ्यासको 10 को लागि तल भिडियो हेर्नुहोस्।
शारीरिक वजन जानवरको साथ 30-दिनहरूमा च्याईड र च्याइस्टेड पाउनुहोस्
महिलाहरु को लागि,2महान व्यायाम कार्यक्रमहरु जुन हामी सिफारिश गर्छन कि बिकनी शारीरिक कार्यस्थल र फ्लैट बेली फास्ट हुनेछ। बिकनी शारीरिक Workouts तपाईंलाई बिकनी निकाय अनलाइन व्यायाम भिडियोहरू, एक पोषण गाइड, एक कसरत गाइड, 21 दिन लूट ब्लाउज ग्लुटो अभ्यास र धेरै अधिक प्रदान गर्दछ।
फ्लैट बेली फास्ट एक निजी कसरत कार्यक्रम व्यक्तिगत प्रशिक्षक ड्यानरेट मई द्वारा बनाईएको छ। को बारे मा राम्रो कुरा फ्लेट बेली फास्ट यो डेनी मई ले तपाइँको लागि डीभिडीमा आफ्नो योजना प्रस्ताव गरिरहेको छ कि तपाई भर्खरै शिपिंगको लागि तिर्न पर्दछ ताकि यो निश्चित रूपमा बाहिरको चेक आउट हो। फ्लैट बेली फास्ट पनि स्वस्थ मोटो जलाउने व्यञ्जनहरु संग एक 10 दिन खाने योजना समावेश गर्दछ।
त्यहाँ कुनै राम्रो अभ्यास व्यायाम छैन, त्यहाँ थुप्रै मार्गहरू जुन काम गर्न सिद्ध छन्। यी प्रभावकारी कसरत कार्यक्रमहरूले हजारौं मानिसलाई थप शरीरको बोस बहाउन मद्दत गरेको छ। निम्न रूपमा मात्र यी एक सम्मानित तालिकाहरूले तपाईंलाई परिणामहरू छिटो मद्दत गर्न मद्दत गर्नेछ।
* उत्तम अभ्यास के हो?
पूर्ण शरीर workouts र उच्च तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण (HIIT) काम चमत्कार। HIIT कुन कुरा सोचिरहेको छ? HIIT, वा उच्च-तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण, एक प्रशिक्षण प्रविधी हो जुन तपाईं सबै-आउट प्रदान गर्नुहुन्छ, द्रुत, तीव्र फटाउने अभ्यासको माध्यमबाट सय प्रतिशत प्रयास, पछि छोटो, कहिलेकाहीँ सक्रिय, रिकभरी अवधिहरू। तपाईंको पेटमा लक्ष्य गर्ने कोर अभ्यासहरूसँग पूर्ण शरीरको कार्यपुस्तकहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंको पेट क्षेत्रमा रक्त परिसंचरण सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ; जो गहिरो पेट मोटो घाटा हुनेछ।
यी व्यायाम तालिकाहरूको बारेमा सम्झनको मुख्य चीज हो कि तपाइँ तिनीहरूलाई सार्न अघि सही प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। धेरै गरीब फारमको साथ यी अभ्यास गर्ने आदतमा पुग्न केवल अधिक प्रतिनिधि को लागी गरीब फारम राम्रो भन्दा अधिक हानि हुन्छ।
जब अनुचित रुपमा गरिन्छ, पेट मेडआउटहरूले भविष्यमा समस्याको समाधान गर्न सक्छ। तपाईंको कसरत दिनचर्या कूद गर्नु अघि तपाइँ सही प्रविधि जान्नुहुन्छ। उत्तम अभ्यास के हो? त्यहाँ छनौट गर्न धेरै उत्कृष्ट अभ्यासहरू छन्, यहाँ सुरु गर्न एक महान एक छ:
* स्थिरता बल क्रच
जब सही तरीका प्रदर्शन गरे, यो पेट पेट मा छुटकारा पाउने सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। तपाईलाई के गर्न आवश्यक छ: पहिले स्थिरता बल मा फिर्ता राख्नुहोस्, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पछाडिको निचो र बीचमा माथि बढेको छ।
तपाईंको घुँडा फ्याँक्न निश्चित गर्नुहोस् र तपाईंको खुट्टा भुइँमा नदिनुहोस्। अब आफ्नो हातहरू तपाईंको टाउकोमा राख्नुहोस् र आफैलाई उठाउनुहुन्छ जस्तै तपाई एक सामान्य कुकुरमा हुनेछ ... र त्यसपछि क्रमशः शुरुवातको स्थितिमा फर्कनुहोस्।
* तर व्यायाम बल किन प्रयोग गर्दछ?
अधिक गति को गति बेहतर छ किनकी एक व्यायाम बल को फ्लेक्स को अधिक फ्लेक्स को कारण बनता छ। यसले नियमित क्रसहरू भन्दा बढी मांसपेशिहरु पनि गर्दछ। तपाइँले थप क्यालोरीहरू जलाउनुहुन्छ र व्यायाम बलको साथ बलियो मिडियामेन्टको विकास गर्नेछ।
अन्तिम तर कम्तीमा, सफल वजन व्यवस्थापनको कुञ्जी स्थिरता हो। एक सिद्ध योजना पक्का गर्नुहोस् र अनावश्यक र निरन्तर क्रियाकलाप लिनुहोस् वजन घटाने नतिजाहरु जुन तपाइँ चाहानुहुन्छ। किनकी धेरै मानिसहरूसँग स्पष्ट लक्ष्य छैन, धेरै मानिसहरू मुख्य अभ्यासको साथ सुरू गर्छन् र धेरै हप्तासम्म रुचाउँछन् जुन यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ।
यही कारण व्यायाम कार्यक्रमहरू जस्तै 1 घण्टा बेली ब्लास्ट र ड्यानरेट मे मुफ्त फ्लैट बेली फास्ट डीभिडी कति प्रभावकारी छन्। यी प्लानहरू एक निश्चित समय अवधिका लागि हुन्, र तपाइँलाई दैनिक आधारमा तपाईंले के गर्नु पर्छ भनेर थाहा पाउनु हुन्छ। तपाईंले गर्नु आवश्यक छ जुन तपाईंले चाहानु भएको परिणामहरू हेर्न एक कार्यक्रम पछ्याउँदैछ। यो निरन्तरता र स्थिरता तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साथी हुनेछ जब तपाई चाहानुहुन्छ शरीर प्राप्त गर्न आउनुहुनेछ। हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा यस लेखमा तपाईंका विचारहरू थाहा पाउनुहोस् र तपाईंलेसँग कुनै पनि अन्य वजन घटाने सुझावहरू साझा गर्न निःशुल्क महसुस गरौं
मार्च 3, 2018 व्यवस्थापक ब्लग कुनै टिप्पणी छैन
नि: शुल्क eBook: आलसी मान्छे को वजन घटाने को गाइड